သင်သိပါသလား? | CarsDB
ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးဆန်းထွေလာအချက်တွေနဲ့ လူသိနည်းတဲ့အချက်တွေကို ရှာဖွေတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အရှိန်နှုန်းမြင့်မောင်းနှင်လို့ အဖမ်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ 1902 ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်.။ အဲဒီအချိန်က 45 mph အထိ မြန်အောင်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ကား အတော်ရှားပါတယ်.။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့် လူသေဆုံးမှုဟာ 1896 မှာ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ပထမဆုံး အက်ဆီးဒင့်ကတော့ 1769 ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ.။ အဲဒီကားကို အခုချိန်ထိ ပဲရစ်စ်မြို့မှာရှိတဲ့ Conservatoire Nationale des Arts et Metiers ပြတိုက်မှာ ပြသထားပါတယ်.။
Mr Allen Swift ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူ့ကား 1928 ခုနှစ်ထုတ် Roll-royce Roadster ကို 82 နှစ်ကြာအောင် မောင်းနှင်ခဲ့ပါသတဲ့.။ တော်တော်ရိုသေတယ်လို့ ပြောရပါမယ်.။
ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးလုံးကို ဖြုတ်ပြီး အစားထိုးလဲလှယ်တဲ့နေရာမှာ အမြန်ဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတာကတော့ နိုဝင်ဘာ 21 ရက် 1985 ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်.။ ကြာမြင့်ချိန် 42 စက္ကန့်သာ ကြာပါတယ်တဲ့.။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး မီးပွိုင့်ကို 1927 ခုနှစ်မှာ Wolverhampton မှာစတင်တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်.။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနိမ့်ဆုံးကားကို Perry Watkins က တီထွင်ခဲ့ပါတယ်.။ “Flat Mobile” လို့အမည်တွင်တဲ့ ကားရဲ့ အမြင့်ကတော့ 19 လက်မပဲ ရှိပါတယ်.။ မြန်မာပြည်လမ်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကွက်တိပဲပေါ့.။
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ရောင်းချတဲ့ကားကတော့ 1931 Bugatti Royale Kellner Coupe ဖြစ်ပါတယ်.။ ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာ 8.7 သန်း ဖြစ်ပါတယ်.။
ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံးကားကတော့ 1884 ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ပြီး 2011 ခုနှစ် လေလံပွဲမှာ ရောင်းချတဲ့အထိ မောင်းနှင်နိုင်နေသေးတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ အဲဒီကားကို လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ရာမှာ ဒေါ်လာ 4.6 သန်း ရရှိခဲ့ပါတယ်.။
ကမ္ဘာ့အများဆုံး ဒဏ်ကြေးအရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်.။ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ဒဏ်ကြေးကို ဝင်ငွေနဲ့ အချိုးချပြီး ပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့သူဟာ သူ့ကားကို 180 mph နှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပေးဆောင်ရတဲ့ ဒဏ်ကြေးကတော့ ဒေါ်လာ 1 သန်းဖြစ်ပါတယ်.။
ကားမောင်းသူအားလုံးရဲ့ 90% ဟာ စတီယာရင်ရှေ့ရောက်ရင် သီချင်းဆိုတတ်ကြပါသတဲ့.။ သင်ရော သီချင်းဆိုဖြစ်ပါသလား?
ကားတစ်စီးကို တစ်နာရီ မိုင် 60 နှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်သွားရင် လပေါ်ကိုရောက်ရှိဖို့6လ ကြာပါလိမ့်မယ်.။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ကားမောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကားကျပ်တဲ့အတွက် ကြာမြင့်ချိန် 99 ရက်ခန့် ကုန်ပါသတဲ့.။
နောက်ဆုံးပေါ် F1 ကားတစ်စီးဟာ ဥမင်လှိုင်ခေါင်းအတွင်း 120 mph နှုန်းနဲ့ ဇောက်ထိုးမောင်းနိုင်ပါသတဲ့.။
ကားရဲ့ Remote တစ်ခု ပျက်မသွားခင် အကြိမ်ရေ 256 ကြိမ်သာ နှိပ်နိုင်ပါသတဲ့.။ ခဏခဏ နှိပ်နေတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်ပါတယ်.။
တစ်နှစ်လျှင် ကားအစီးရေ သန်း 60 ထုတ်လုပ်နေပါတယ်.။ ဒီပမာဏဟာ နေ့စဉ် အစီးရေ 165,000 ထုတ်လုပ်နေတဲ့ သဘောပါ.။
ကားရဲ့ Remote ကို သင့်ခေါင်းနားမှာ ကပ်ထားပြီးနှိပ်ရင် အကွာအဝေးကို (2) ဆ မြှင့်တင်နိုင်ပါသတဲ့.။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းခွံဟာ Amplifier တစ်လုံးသဘောမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးလို့ပါ.။ စမ်းကြည့်ပါလား.။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်က လမ်းမတွေပေါ်မှာ သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ ကားအစီးရေ သန်း 1 ထောင် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်.။
ကားနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးဆနျးထှလောအခကျြတှနေဲ့ လူသိနညျးတဲ့အခကျြတှကေို ရှာဖှတေငျပွပေးလိုကျပါတယျ.။
ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး အရှိနျနှုနျးမွငျ့မောငျးနှငျလို့ အဖမျးခံရတဲ့ဖွဈစဉျဟာ 1902 ခုနှဈက ဖွဈပါတယျ.။ အဲဒီအခြိနျက 45 mph အထိ မွနျအောငျမောငျးနှငျနိုငျတဲ့ကား အတျောရှားပါတယျ.။
ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး ကားအကျဆီးဒငျ့ကွောငျ့ လူသဆေုံးမှုဟာ 1896 မှာ ဖွဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ပထမဆုံး အကျဆီးဒငျ့ကတော့ 1769 ခုနှဈမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာပါ.။ အဲဒီကားကို အခုခြိနျထိ ပဲရဈဈမွို့မှာရှိတဲ့ Conservatoire Nationale des Arts et Metiers ပွတိုကျမှာ ပွသထားပါတယျ.။
Mr Allen Swift ဆိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျဟာ သူ့ကား 1928 ခုနှဈထုတျ Roll-royce Roadster ကို 82 နှဈကွာအောငျ မောငျးနှငျခဲ့ပါသတဲ့.။ တျောတျောရိုသတေယျလို့ ပွောရပါမယျ.။
ကားအငျဂငျြတဈလုံးလုံးကို ဖွုတျပွီး အစားထိုးလဲလှယျတဲ့နရောမှာ အမွနျဆုံးအဖွဈစံခြိနျတငျထားတာကတော့ နိုဝငျဘာ 21 ရကျ 1985 ခုနှဈမှာဖွဈပါတယျ.။ ကွာမွငျ့ခြိနျ 42 စက်ကနျ့သာ ကွာပါတယျတဲ့.။
ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး မီးပှိုငျ့ကို 1927 ခုနှဈမှာ Wolverhampton မှာစတငျတပျဆငျခဲ့ပါတယျ.။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အနိမျ့ဆုံးကားကို Perry Watkins က တီထှငျခဲ့ပါတယျ.။ “Flat Mobile” လို့အမညျတှငျတဲ့ ကားရဲ့ အမွငျ့ကတော့ 19 လကျမပဲ ရှိပါတယျ.။ မွနျမာပွညျလမျးတှနေဲ့ဆိုရငျတော့ ကှကျတိပဲပေါ့.။
ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး ရောငျးခတြဲ့ကားကတော့ 1931 Bugatti Royale Kellner Coupe ဖွဈပါတယျ.။ စြေးနှုနျးက ဒျေါလာ 8.7 သနျး ဖွဈပါတယျ.။
ကမ်ဘာ့သကျတမျးအရှညျဆုံးကားကတော့ 1884 ခုနှဈမှာ ထုတျလုပျပွီး 2011 ခုနှဈ လလေံပှဲမှာ ရောငျးခတြဲ့အထိ မောငျးနှငျနိုငျနသေေးတဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံထုတျ ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ.။ အဲဒီကားကို လလေံတငျရောငျးခခြဲ့ရာမှာ ဒျေါလာ 4.6 သနျး ရရှိခဲ့ပါတယျ.။
ကမ်ဘာ့အမြားဆုံး ဒဏျကွေးအရိုကျခံခဲ့ရတဲ့ဖွဈစဉျကတော့ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံမှာ ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ.။ အဲဒီနိုငျငံရဲ့ ဥပဒအေရ ဒဏျကွေးကို ဝငျငှနေဲ့ အခြိုးခပြွီး ပေးဆောငျရတာဖွဈပါတယျ.။ ဒဏျရိုကျခံရတဲ့သူဟာ သူ့ကားကို 180 mph နှုနျးနဲ့ မောငျးနှငျခဲ့တာဖွဈပွီး ပေးဆောငျရတဲ့ ဒဏျကွေးကတော့ ဒျေါလာ 1 သနျးဖွဈပါတယျ.။
ကားမောငျးသူအားလုံးရဲ့ 90% ဟာ စတီယာရငျရှရေ့ောကျရငျ သီခငျြးဆိုတတျကွပါသတဲ့.။ သငျရော သီခငျြးဆိုဖွဈပါသလား?
ကားတဈစီးကို တဈနာရီ မိုငျ 60 နှုနျးနဲ့ မောငျးနှငျသှားရငျ လပျေါကိုရောကျရှိဖို့6လ ကွာပါလိမျ့မယျ.။
အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ ကားမောငျးသူတဈယောကျဟာ သူ့သကျတမျးတဈလြှောကျလုံးမှာ ကားကပျြတဲ့အတှကျ ကွာမွငျ့ခြိနျ 99 ရကျခနျ့ ကုနျပါသတဲ့.။
နောကျဆုံးပျေါ F1 ကားတဈစီးဟာ ဥမငျလှိုငျခေါငျးအတှငျး 120 mph နှုနျးနဲ့ ဇောကျထိုးမောငျးနိုငျပါသတဲ့.။
ကားရဲ့ Remote တဈခု ပကျြမသှားခငျ အကွိမျရေ 256 ကွိမျသာ နှိပျနိုငျပါသတဲ့.။ ခဏခဏ နှိပျနတေဲ့သူတှေ သတိထားသငျ့ပါတယျ.။
တဈနှဈလြှငျ ကားအစီးရေ သနျး 60 ထုတျလုပျနပေါတယျ.။ ဒီပမာဏဟာ နစေ့ဉျ အစီးရေ 165,000 ထုတျလုပျနတေဲ့ သဘောပါ.။
ကားရဲ့ Remote ကို သငျ့ခေါငျးနားမှာ ကပျထားပွီးနှိပျရငျ အကှာအဝေးကို (2) ဆ မွှငျ့တငျနိုငျပါသတဲ့.။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျ့ရဲ့ဦးခေါငျးခှံဟာ Amplifier တဈလုံးသဘောမြိုး လုပျဆောငျပေးလို့ပါ.။ စမျးကွညျ့ပါလား.။
ယနေ့ ကမ်ဘာပျေါက လမျးမတှပေျေါမှာ သှားလာလှုပျရှားနတေဲ့ ကားအစီးရေ သနျး 1 ထောငျ ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ.။
Posted at: 05-08-2015 12:06 PM